Kabary fisaorana tamin’ny fanomezana Solom-bodiondry - Informations et Actualités sur Madagascar
Culture Education Kabary fisaorana tamin’ny fanomezana Solom-bodiondry
by Alpha world on 23 h 41 in Culture, Education
Mpamoaka: Tompokolahy sy tompokovavy!
Toa an-dRafotsibe nanandrana anana hono ka sady tsy milaza ny tsirony no tsy manambara ny tsatsony fa izahay mianakavy kosa tsy ny tsirony sy ny tsatsony no ambaranay eto fa ny aina sy ny hanitra aterak’izao fihaonan-tsika mianakavy izao.
Koa tsy havandra hiraraka izy ity ka hotohanana, fa efa nomenareo tamim-pahatsorana sy tamim-pitiavana ka dia raisinay am-pifaliana tanteraka. Mamy hono ny fary fa misy fakany, mamy ny tantely fa misy faikany, fa raha izao ataonareo izao dia tsy misy fakany hariana na faikany haloa fa sitraka sy telina avokoa.
Tsy vitan’ny hoe nahafa-po anay ny tokim-pitiavana nambara teo, mbola temerinareo voninahitra ihany koa izahay tamin’ny fanomezana ny hajam-bolana.
Tsy hamahana na hanisy resaka lava mikasika ity izahay satria ianareo tsy mpividy olona, izahay tsy mpivaro-janaka, ary tsy hisy hahaonitra izay rehetra lany tamin’ny nanabeazana ny zatovovavy ihany koa.
Ny teninay dia hoe:
Mionera be ny lany tompoko. Ho tahaka ny laingom-boaloboka lohataona anie ny harenareo, handrantsana vao mihamisandratra.
Ho toy ny fidorobok’amboara anie, iray no tinapaka zato no maniry.
Andriamanitra ilay manankarem-pahasoavana anie hamaly fitia anareo.
By Alpha world at 23 h 41